“Qaranka oo kaashanaya ciidamadiisa waxa ka go’an in cadaaladda la hor keeno gacan ku-dhiiglahaas” - Wargane News
Home Somali News “Qaranka oo kaashanaya ciidamadiisa waxa ka go’an in cadaaladda la hor keeno...
Weftiga xukuumadda ka tirsan ee booqday xarunta gobolka Awdal ee Boorama ayaa u tagay qoyskii marxuum Jaamac Bidaar oo ka mid ahaa labadii sarkaal ee dhawaan lagu dilay deegaanka Qorilugud.
Wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka tirsan weftigaas ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkooda ay ku joogaan magaalada Boorama, waxaanu sheegay inay u tageen halkaas garab-joogsiga iyo qalbi buuxinta qoyskii uu ka baxay Alle ha u naxariistee marxuum Jaamac Bidaar.
Weftgan ayaa waxa ka mid ah, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiiru-dawlaha maaliyadda, Taliyaha ciidanka booliska iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda.
Booqashada weftiga ee qoyska uu ka baxay sarkaalka la dilay, ka dib waxa ka hadlay wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaanu yidhi, “Ujeedada safarkan ayaa ahaa garab joogsiga iyo qalbi buuxinta qoyskii uu ka baxay Allah ha u naxariistee sarkaal Jaamac Bidaar oo gacan ka gar darani ku dishay aaga Qorilugud. Allaha u naxariistee sarkaalkan ayaa ka mid ahaa ma seexdayaasha sugga soohdimaha dalka, isla markaana shacabku ku seexdaan, waa dhab oo naf walba sabab iyo ajal ayey leedahay, balse in maanta sarkaalkan dhintay iyo walaalkiisii la dhintayba ay sababsadaan gacan qof aynu sokeeye moodaynay waa naxdin iyo wax aynaan filayn. Guud ahaan qaranka Somaliland isagoo kaashanayaa ciidamadiisa kala duwan, kuna xisaabtamaya shacabkiisa feejigan waxaa ka go’an in cadaaladda la hor keeno gacan ku-dhiiglahaas, isla markaana lagu fuliyo qodobada sharcigu jideeyey.”
Wasiirka oo hadalkiisa sii wataana waxa uu intaas ku daray. “Jaamac iyo Maxamed kamay dhiman qoys iyo qof keliya ee waxay ka baxeen qaranka Somaliland, qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeena waxaan Illaahay uga rajaynaynaa bedel, qaranka Somaliland-na Alle kaalintii ay ka baxeen ha u buuxiyo.”
Somaliland: Xaaji Cabdi Waraabe Oo Ku Baaqey In La Ansixiyo Xeerka Banaanka Caalamiga Ah Culimada na Baaq U Soo Jeediyey